China MZJ Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
အလျားလိုက် slurry pump
အကြီးစား Duty Slurry Pump
MHH အမြင့် ဦး ခေါင်း slurry pump
ML အလင်း Slurry Pump
MG ကျောက်စရစ် Pump
ဒေါင်လိုက် Slurry Pump
MSPR ရော်ဘာစီတန်း Slurry Pump
နစ်မြုပ် Slurry Pump
တူးဖော် - ဟိုက်ဒရောလစ် Submersible Slurry Pump
အလျားလိုက် slurry စုပ်အပိုင်းအပို
ဒေါင်လိုက် Slurry Spare အပိုင်း
နစ်မြုပ်သော Slurry Pump အပိုပစ္စည်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အလျားလိုက် slurry pump > MZJ Slurry Pump
သတ္တုတွင်းများအတွက် slurry pump
ရော်ဘာစီတန်း Slurry Pump
MZJ slurry pump များသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအဓိကအားဖြင့်အစိုင်အခဲအမှုန်များပါ ၀ င်သောပွန်းပဲ့မှုန့်သဘာ ၀ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ကျောက်မီးသွေးအလွှာနှင့်လေးလံသောအလတ်စားကျောက်မီးသွေးပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းမြစ်တွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်သတ္တုရိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကိုအများဆုံးသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၄၅% မော်တာနှင့် ၆၀% သတ္တုရိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရစီးရီးဖြင့်စီးဆင်းနိုင်သည်။ ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ centrifugal ရွှံ့နွံစုပ်စက်ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ Centrifugal ပြင်းထန်သောစုပ်ယူခြင်းအားဖြင့်သဲမှုန့်အမှုန့်ပန့်၊ လျှပ်စစ်ပန့်၊ သဲကျောက်ထုပ်စုပ်စက်၊ ပြင်းထန်သောရေစုပ်စက် Horizontal Centrifugal Slurry Pump သဲပန့်ရွှံ့စုပ်စက်သတ္တုတွင်းအတွက်စုပ်စက်။
သဲ Slurry Pump
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောသတ္တုတွင်း Centrifugal ကျောက်စရစ်သဲမြေမှုန့်ပန့်များပွန်းပဲ့ခံနိုင်ရည်အစိုင်အခဲကိုင်တွယ် Centrifugal သဲဆေးကြွေရည်စုပ်
မြင့်မားသောဦးခေါင်းအကြီးစား MZJ slurry ပန့်
အထူး slurry pump အမျိုးအစားအနေဖြင့်၊ မြင့်မားသောဦးခေါင်းအကြီးစား MZJ slurry ပန့်သည် single-stage suction slurry pump ဖြစ်သည်။ ပန့်ကိုယ်ထည်သည် အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပ bimetallic တည်ဆောက်ပုံကို လက်ခံပြီး ပန့်ခွံသည် ဒေါင်လိုက်အလယ်အဖွင့်ထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်။ နော်ဇယ်သည် 45° ကြားကာလတွင် မတူညီသော ရာထူးရှစ်ခုကို လှည့်နိုင်သည်။
ဒေါင်လိုက် Submersible Slurry Pump.Submersible slurry pumps များသည် သတ္တုတွင်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ သတ္တုဗေဒ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
High Head Sand Mining Horizontal Slurry Pump
High head sand mining horizontal slurry pump သည် အများဆုံးပါဝင်မှု wt 45% (ash) နှင့် wt 60% (ore) ရှိသော abrasive နှင့် corrosive solids-bearing slurry ကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Wastewater Recirculation Slurry Pump
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Wastewater Recirculation Slurry Pump ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ သတ္တုဗေဒ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပြီး အစိုင်အခဲအမှုန်များပါရှိသော ပွန်းပဲ့သော အရည်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော MZJ Slurry Pump ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော MZJ Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!
slurry pump ၏လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။
လိပ်စာ: Pingan North လမ်း၊ Shijiazhuang, Hebei အခန်း ၂၅-၉၀၅
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှကြိုဆိုပါသည်။ အလျားလိုက် slurry ပန့်၊ ဒေါင်လိုက် slurry ပန့်၊ submersible slurry pump သို့မဟုတ် pricelist နှင့် ပတ်သက်သော စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Depump Technology Shijiazhuang Co. , Ltd အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။